“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन !तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल” – हिमाल न्युज
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन !तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
स्वास्थ्य कमजोर रहनाले काममा पनि बाधा हुन सक्छ। केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। अर्थ अभावले पनि मन पिरोलिन सक्छ। मिहिनेतले स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ। शुभचिन्तकहरूले केही आशा जगाउनेछन्। समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र आंशिक सफलता मिल्नेछ। उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला।
अवसरका लागि केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। समयमा लगनशील बन्न नसक्ता प्रतिस्पर्धीहरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। कामको चाप बढ्नेछ भने वादविवादले मन खिन्न तुल्याउनेछ। प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरे पनि बुद्धिको उपयोगले प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहनुहोला। हिम्मत गर्दा अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि काम सम्पादन हुनेछ।
अरूका विषयमा चासो लिँदा झमेला आइलाग्न सक्छ। अवसर जुटे पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न समय लाग्नेछ। विवादास्पद कामको जिम्मेवारी आउनाले केही समस्या आइपर्ला। सम्झौता गर्नुपरे पनि बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। अरूको मुख ताक्ने बानीले भने काममा पछि परिएला। समयको महत्त्वलाई ख्याल गर्नुहोला, मिहिनेतले पछि लाभ हुने काम सम्पादन हुनेछ।
प्रतीक्षित नतिजा प्राप्त गर्न काम दोहोर्याउनुपर्ला। स्वास्थ्यका कारण लक्ष्यमा पुग्न समस्या पर्नेछ। अरूका लागि बुद्धि र समय खर्चनुपर्ला। तापनि, लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ। काम पूरा नभए पनि आंशिक फाइदा लिन सकिनेछ। आगन्तुकले व्यर्थैमा अलमल्याउन सक्छन्। पार्टी–भोजको अवसर प्राप्त भए पनि स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सचेत रहनुहोला।
समयमा होस नपुग्नाले फजुल खर्च बढ्नेछ। काममा अनायासै व्यवधान देखा पर्न सक्छ। खर्च गरेर पनि त्यति फाइदा उठाउन नसकिएला। आफ्नै कमजोरीले विवाद निम्त्याउन सक्छ। शुभचिन्तकहरूलाई बेवास्ता गर्दा दु:ख पाइएला। परिवारजनबाट टाढिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। प्रलोभन देखाउनेहरूबाट सजग रहनुहोला। सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई फाइदा हुनेछ।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। चल-अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका प्राप्त हुनेछ। व्यापार–व्यवसायमा फाइदा उठाउन सकिनेछ।
तपाईको आजको दिन शुभ रहोस !! हेर्नुस ज्योतिस...
तपाइको आजको दिन शुभ रहोस हेर्नुस आजको राशिफल...
साँझको समयमा नगर्नुहोस् यी पाँच काम, धनको नाश...
दीपावलीमा वास्तुशास्त्रको कुरा: घरको सजावटमा यी गल्ती ‘अशुभ’...
हत्केलामा त्रिशूल बन्छ ? हस्तरेखाविज्ञका अनुसार चम्कनेछ भाग्य...
वैशाख २३ गतेदेखि २९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल, यस्तो...
यी आठ कुरा ध्यानमा राख्दा जागीर, व्यवसायबाट धन...
तपाइको आजको दिन शुभ रहोस !! आजको राशिफल...
वेद नै विज्ञानको मूल स्रोत !